Rag lacag badan ka sameeya qashinka aad tuurto | WAJAALE NEWS
January 2, 2019 - Written by Reporter:
“Maalmaha nasashada waa maalmaha ugu mashquul badan,” ayuu Govind, oo dhex taagan goob uu ku soo uruuriyan qashin badan.
Waxaa joornaalada meesha dhooban ka muuqda sawirka rai’sal wasaare Narendra Modi oo ka hadlaya wada shaqaynta dhaqaalaha.
“Meelaha qashinka lagu qubo way isbadaleen sanooyiinkii ugu dambeeyay,” ayuu yidhi Joginder oo 48 jir ah oo isagu ahaa qofkii bilaabay uruurinta waxyaabaha la tuuro sida biraha iyo qalabka kale.
“Wax walba hadda waa mid qafiif ah,waxaa imika jira waxyaabo badan oo caagado ka samaysan ,waxaana qalinkii imika lagu badalay naxaas taasi oo ka qaalisan,ayuu yidhi Joginder.
Maadaama labadani walaalaha ay halkan wakhti badan ku bixiyaan waxa meesho u yaalla burjiko ay shaah ku karsadaan iyo sariir ay wax yar ku indho guduudsadaan amaba habeenada ay meesha baryaan ay ku seexdaan.
“Waa dukaan qof walab ayaa imaan kara dhamaan waa macaamiil,” ayuu yidhi Joginder.